जिमेलमा थपियो ‘स्मार्ट कम्पोज र रिप्लाई’ फिचर | Jukson
पछिल्लोपटक जिमेलमा नयाँ स्मार्ट फिचर थप भएको छ । उक्त फिचरले जिमेल कम्पोज गर्ने कामलाई अझै सजिलो तथा छिटो बनाउनेछ । जिमेलको यो फिचर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सयुक्त छ । यसले प्रयोगकर्ताको इमेललाई विश्लेषण गरी उसले टाइप गर्ने सम्भावित वाक्य ‘सजेस्ट’ गर्दछ ।
के तपाईलाई थाहा छ ? नेपाल दक्षिण एसियामै राम्रो कानुनी राज्य भएको देश हो ।
प्रभासको नयाँ सिनेमा 'साहो' को नयाँ टिजरमा देखियो यस्तो एक्सन !
सिन्धुपाल्चोक केन्द्र भएर ५.५ रिक्टर स्केलको भूकम्प
चलचित्र ‘तारेभिर’ असार २ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदै